“ cadhada iyo Dudmada xildhibaan dheeg maaha mid ka timid cadaalad darro ee waa cadhadii uu ka qaaday waayidii uu waayey afhayeenkii golaha guurtida.” Cumar Sayid Agaasimaha Duulista - Haldoor News | Haldoor News
“ cadhada iyo Dudmada xildhibaan dheeg maaha mid ka timid cadaalad darro ee waa cadhadii uu ka qaaday waayidii uu waayey afhayeenkii golaha guurtida.” Cumar Sayid Agaasimaha Duulista
Hargeysa (Haldoornews ) Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Duulista Hawada Iyo Gaadiidka Cirka Somaliland Cumar-Sayid Cabdilaahi Aadan ayaa maanta si adag uga jawaabay Eedo uu Xildhibaan Dheeg u jeediyey Wasaaradaasi.
Agaasimaha oo maanta Shirjaraa’id oo uu ku qabtay Xafiiskiisa, ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin eedo ka soo yeedhay Xildhibaan Maxamed Maxamuud (Xildhibaan Dheeg) oo ka tirsan Golaha Guurtida Somaliland.
Agaasime Cumar Sayid ayaa ugu horayn faahfahain ka bixiyey Mashruuca ay maal galisay dawaladda Kuwait ee dib u dhiska Madaarada oo Xildhibaan dheeg uu sheegay in la musuqmaasuqay waxa uu yidhi “ Sida ay la socdaan dadwaynaha Somaliland waxay dawlada Kuwait ugu deeqday wasaarada duulista hawada iyo gaadiidka cirka lacag dhan $ 10 million oo loo kala qaybiyay labada Madaar ee Hargeysa iyo Berbera, Labadaas mashruuc oo mid walba si guul ah ku dhamaaday, dadwaynuhu ka dharagsan yihiin, isla markaana ay maamulayeen oo kormeerayeen khubaro ay Dawladda Kuwait u soo dirsatay. Ka dib guushaas laga gaadhay labadaas mashruuc ee hore, ee Kuwait waxa ay wasaaradda ugu deeqday Lacag dhan $ 5 Milyan oo kale o lagu dhamaystirayo Madaarka Caasimada sida dhabada diyaaradaha oo laga dhigay 3.7 KM oo maanta diyaarad walba oo aduunka jirta ka kici karto kana dagi karto iyada oo culayskeeda shiidaal iyo rakaabkuba u dhamaystiran yihiin.”
“Horumarka ay keentay deeqdaas dawladda Kuwait waxay ka muuqataa imaanshaha diyaarad laga leeyahay imaaraadka ee Fly dubai oo taariikhda markii koowaad timid Somaliland, iyo bilicda wanaagsan ee Madaarka caasimada ee ay ka markhaati kaceen dhamaan umadda Somaliland haday tahay qurbajoog, Ganacsato, Siyaasiyiiin, Mucaarid iyo Muxaafidba.”
Agaasimaha Duulista ayaa intaasi ku daray “ Dawladda Kuwait marnaba lacag umay qoondayn dhulka loo xayndaabay Madaarka Cigaal waayo dunidda oo dhan dhulalka Dawalaha ayaa leh, xukuumadda Somaliland ayaa laga rabay inay dhulkaas maaro u hesho, arrintaasna way samaysay. Waxaan xildhibaanka waydiinaynaa sababta ay dawlada Kuwait 5 milyan oo kale ugu deeqday Wasaarada hadaan 10 kii hore si fiican loo maamulin ?”ayuu yidhi Cumar.
Agaasimuhu side kale isaga oo ka hadlaaya, Arinta Xadaynta Madaarka, oo Mudane Dheeg uu sheegay in Dawalddu ay dad danyar ah Xoog dhul ugaga qaaday waxaanu yidhi:- “Marka hore waxaan si mug leh mar labaad ugu mahad naqaynaa dadwaynihii reer Somaliland ee dhulkoodii ay lahaayeen iyadoon la qasbin si muwaadinmo ah ugu deeqay in Madaarkooda lagu gaadhsiiyo heerka Madaarada kale ee dunida. Iyada oo arintaasna amaan badan lagu siiyay dadka deegaanka haday tahay Salaadin, Cuqaal, Waxgarad iyo dhamaan qaybaha Bulshada ee deegaanka Koonfurta Hargeysa. Dadka degaanku waxay Wasaarada kula heshiiyeeen in dhulka madaarku u baahan yahay ay bixinayaan, isla markaana loo celiyo wixii hanti ma guurto ah ay ka samaysteen sida barkadaha, baliyada, beeraha iyo guryaha .Wasaaradaha Hawlaha Guud iyo Beeraha ayaa qiimeeyey hantidii loo celinayey dadkaas, iyada oo lacagtaas dadkii lahaa la siiyay markhaatina ay ka yihiin dadkii lacagta la siiyay iyo Cuqaashoodiba oo aad halkan ku arki kartaan heshiishyadii ay ku qaateen magdhawgoodii.”
M. Cumar Sayid Cabdilaahi ayaa sidoo kalena intaasi ku daray “ Xaga dhulka dadkaas waxa lagala wareegay dhul dhan 150 block oo dhul ah oo Wasaaraddu liis garaysay, liiskoodiina dawladda hoose ee caasimada gacanta ku hayso sida ugu dhakhsaha badan ayaa loogu celin doonaa Insha alaahu , waxaannu ku amaanaynaa dadka deegaanka sida sharafta leh ee ay noogu samrayaan noona sugayaan.” Ayuu yidhi Agaasime Cumar waxaanu intaas ku daray “ Waxaan xildhibaanka u sheegayaa in amaantaas dadka degaanku mutaysteen ee Dawlad iyo Wasaarad ahaanba laga wada markhaati kacay aanu umadda ugu sheeegi Karin in la qasbay oo arintaasi ay tahay arin sida cadceeda u muuqata.”
Agaasimuhu mar uu ka hadlaayey, Waaxaha Madaarka, waxa uu yidhi “Waxaan Xildhibaanka moodayay inuu xog ogaal u yahay qaybaha kala duwan ee madaarka ee u kala baxdo.Wasaarada Duulistu ma soo magacawdo Taliyaha Laanta Socdaalka, Taliyaha Booliska, Maamulaha Kastamka iyo Maamulaha Laanta Bankigaba ee madaarka, Afartaas hay’adood ayaa ka masuul ah ciday Madaarka keensanayaan iyada oo loo eegayo hadba aqoontiisa iyo kartidiisa laakin aan lagu salaynayn qaab beeleed. Manay fiicnayeyn in xildhibaanku ciidamada qaranka uu sumad reer u kala yeelo oo maanta Saraakiishii Booliskeena ee umadda u shaqaynayay shaadh reereed u galiyo. Haduu xildhibaanka doonayo in war laga siiyo Waaxaha Wasaarada Duulista ee ka hawl gala Madaarka Cigaal, waxaan u sheegayaa in si cadaaalad ah oo gobolada Somaliland oo dhan ka muuqdaan loo qaybiyey iyada oo dadka degaanka koonfurta hargeysana markii koowaad taariikhda saami fiican laga siiyey Saraakiisha Wasaarada Duulista ee ka hawl gala Madaarka oo ay maanta qayb fiican oo muuqata ku leeyihiin.”
Agaasime Cumar Sayid isaga oo ka hadlaya, Shaqaalaha Madaarka,waxa uu yidhi: “ Warka xildhibaanku ku sheegay in Shaqaalaha Madaarka 11o qof, ay ka soo jeedaan beesha Madaxweynaha waa war aan sal iyo raad toona lahayn, dee nin wayn been baad sheegaysaa ku odhan kari mayne waxaan leenahay malaha xildhibaanku wuu is moodsiiyay.”
“Saxaafadda Madaxa banana iyo cid walba oo arintaas doonaysa inay ka qanacdo way u furan tahay inay baadhis madax banaan ku samayso, Shaqaalaha Wasaaradda Duulista, iyo Hay;ada kale ee ka hawl gala Madaarka Caasimadu waa Shaqaale isku dhafan oo
gobol walba ka yimid, dadka deegaanka koonfurta hargeisana saamigii ugu fiicnaa taariikhda intii Somaliland jirtay ayay maanta leeyihiin”
Mr. Cumar-Sayid ayaa sidoo kalena fariin u diray Xildhibaan Dheeg waxaanu yidhi “Waxaan Xildhibaanka xasuusin lahaa in wakhtigii dawladii riyaale ay ahayd wakhtigii ay Shaqaalaha degaankani ugu yaraayeen Madaarka iyada oo tiro faro ku tiris ahi joogtay, xildhibaanku markaas wuxuu ahaa xildhibaan muxaafid ah oo xukuumadii hore sacabka ugu tumayay qadintii la qadiyay dadka degaanka. Mana filayo maanta in xildhibaan dheeg ka hadlayo dan guud oo deegaanka ah oo hore ayuu uga hadli lahaa intii Somaliland jirtayba xildhbaan ayuu ahaa. Waxaan filayaa cadhada iyo maaga iyo dudmada uu sheegtay Xildhibaan dheeg ee dawladda uu ka diiday inaanay ahayn wuxuu afka ka sheegayo oo markii uu muxaafidka ahaaba wuu sheegi lahaa haday jiraan ee waa cadho ka kacday waayidii uu waayay Afhayeenimadii Golaha Guurtida.” Ayuu yidhi Agaasimaha Wasaaradda Duulista Somaliland.